Waalidkaa ka mas’uul ah mustaqbalka caruurta ee xagee buu ku socdaa mustaqbalka caruurta soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer Galbeedka? | Somaliska
Shaki kuma jiro in waalidiinta soomaaliyeed ee wadamada reer galbeedka ku nool ay dareemayaan in doorkoodii waalidnimo laga riixday oo dawladaha martida looyahay ay noloshii qoysaka si hoose u faragashadeen. Nolosha reer galbeedku waa mid siyaabo badan uga duwan tii wadankeenii hooyo taas oo waalidiintu aanay fara gelin fara badan ku laheyn waxbarashada ubadka dawladuna aysan nolosha qoyska si aan reerku raali ka ahayn u faragashan jirin. Meelo badan oo dunida ka mid ah oo waddankeenii hooyo ka mid yahay, mas’uuliyadda wasaaradda waxbarashada waxaa ku lamaanan barbaarinta ubadka ee dhinaca edebta iyo dhaqanka suuban. Waddankeenii hooyo macalimiintu uma aanay joogin dugsiyada inay casharada u dhigaan ardeyda oo kaliya ee waxa kale oo ay mas’uul ka ahaayeen dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyadda.
Ardayda oo la baro gaarista go’aanada wanaagsan lagana caawiyo afkaarta suuban. Ardeyga iyo macalinku waxa ay wada jogaan in ka badan inta ardeygu la joogo waalidkiis taasoo ah qiyaastii sadex meelood meel afar iyo labaatanka saac.
Inteena badan waxaan xasuusnaa markii aan ilmaha yar ahayn oo aan dugsiyada aadi jirnay waxaan ka cabsan jirney ama ka xishoon jirnay deriska cabsi ka badan tan aan ka cabsano waalidka.
Waaalidiinta xaafadda oo dhan si isku mid ah ayey caruurta ula dhaqmi jireen ugana celin jireen xumaanta marka ay ogaadaan taasina waxa ay aheyd arrin waalidiinta oo dhan isku afgarteen oo ayada oo aan buug lagu qorin la isku raacay meel adagna ay ka taagnaayeen taasina waxay door muuqda ka qaadatay hanuuninta iyo hagaajinta habdhaqanka dhalaanka soomaaliyeed.
Macalimiinta dhigta dugsiyada waxa ay ahaayeen waalidka labaad ee ardada waalidiintuna arintaas aad bay ugu faraxsanaayeen. Askar boliis ah ma aanay joogi jirin dugsiyada waxaana macalimiinta iyo maamulka dugsiyadu mudnaayeen ixtiraamka ugu sareeya ayaga oo u madax banaanaa waxbarashada iyo ciqaabta ardayda. Waalidiinta waxaa loo yeeraa oo kaliya marka arrini faraha ka baxdo oo la doonayo in laga talo geliyo oo lala socodsiiyo xaaladda.
Dhulka reer Galbeedku, xaaladdu sidaas way ka duwan tahay. Macalimiintu mas’uul kama ahan dhaqanka ardayda mas’uuliyadooduna waa mid kooban; kuna kooban in ay ardada u dhigaan maadooyinka duruusta wixii ardayga ka soo kordhana oo dhaqan xumo ay u arkaana u gudbiyaan sarkaalka boliiska ah ee jooga dugsiga.
Maadaama ma’uuliyadda macalimiintu kooban tahay, waalidka ayaa la doonayaa in ay buuxiyaan doorka banaan. Waalidiinta waxaa laga filayaa in ay xiriir joogta ah la yeeshaan macalimiinta oo ay booqdaan dugsiga todobaad kasta hal mar, ugu yaraan bishiiba laba mar.
Annaga ayaa dooranay in aan caruurteena kula noolaano dhulka reer Galbeedka sidaa darteed waa in aan la qabsanaa nidaamka halkan ka jira oo aan isku daynaa hagaajintiisa waana in aanaan sugin in nidaamku isku keen hagaajiyo. Way jirtaa in nidaamku tixgelin kooban siiyo duruufaheena gaarka ah laakiin annaga weeye kuwa laga doonayo in aan noqono dad wanaagsan oo bulshada aan la nool nahay wax ku soo kordhiya.
Waa wax garawshiiyo leh haddii mararka qaarkood dhaqanku noqdo mid nagu adag siyaabo fara badan laakiin taasi cudurdaar uma noqoneyso in waalidiin badan ka soo bixi waayaan xilkooda waalidnimo oo aanay xitaa ogeyn halka ay caruurtooda joogaan xilligii la doonayey in ay guriga joogaan.
Inta badan caruurta waxaa dambiyada ay geystaan ku cadaadiya ama ay kaga daydaan dabeecadaha xun-xun caruurta kale. Caruurta iyo waliba inbada oo ka mid ah dhalinyarada xoogaa kortay waxa ay u maleynayaan maamulka oo laga hor yimaado (la isku taago) sida macalimiinta, maamulaha iyo ciidamada nabadgelyada inay magic iyo sumcad ku helayaan. Waalidka oo doorkiisu maqan yahay waxa ay ilmaha gacan ku siin kartaa inuu u dhago nuglaado caruurta kale ee ku hogaamiya dambiyada.
Gunta hadalku waa haddii aadan ilmhaaga noloshooda ka qeyb qaadan oo aadan waqti ku haboon gelin oo aadan saaxiib la noqon waxa ay saaxiib ka dhiganayaan saaxiib aad ka shaleyso mustaqbalka.
Saaxiib aan dan ka laheyn mustaqbalka ubadka oo ku hogaaminaya dariiq aan ka soo noqod laheyn oo cawaaqib xumo u soo jiidaya noloshooda.
Wasaaraddaha waxbarashada ee reer galbeedka oo dhan way ku fashilmeen in ay wacyi gelin ku filan waalidiinta ka siiyaan muhimadda ay leedahay in ay ka qeyb qaataan waxbarashada ubadkooda. Waalidiinta intooda badan waxa ay ogaadaan dambiyada ay caruurtoodu galaan marka looga yeero maxkamadaha caruurta. Xitaa shilalka ka dhaca dugsiyada oo ay waajib tahay in waalidku marka ugu horeysa ogaado waalidiintu waa kuwa ugu dambeeya ee ogaada,si kastaba sababtu ha ahaatee.
Waalidiintu waa in ay gacan saar dhaw iyo wada shaqeyn la leeyihiin Maamulka dugsiyadu . Dugsiyadu waa in ay joojiyaan in caruurtu oga turjunto waalidiinta marka dugsiga looga yeero oo laga hadlayo waxyaabo ardayga khuseeya. Maadaama ay jiraan waalidiin fara badan oo aan ku hadlin Swedish, waxaa suurtogal ah in ardayga uu maamulka dugsigu ka dhiganayo turjubaanka uusan si sax ah u ugu gudbin waalidiinta waxyaabaha la doonayo in waalidiintu ogaadaan.
Ugu dambeyntii, sida caruurteenu ugu guuleystaan dhaqanka iyo bulshada cusub waxa ay ku xiran tahay sida aanu uga qeyb qaadanio waxbarshadooda iyo barbaarintooda. Waalidiinu waa in aanay noqon kuwa dib isu dhiga oo suga inta looga yeero ee waa in ay noqdaan kuwo dhiifoon, jooga, si joogta ahna xiriir ula leh dugsiga iyo macalimiinta. Waa arrin aan dhamaad laheyn gacan balaaranna ka geysaneysa mustaqbalka caruurteena.
Waa ok warbixinta , inkastoo dhirir badan tahay in la soo koobo ku fiicnaan laheyd.
Yaa war ka haaya asxaabta shirkii 28 bishan Stockholm ka dhacay. Arimihii 2 sano maxaa cusub.
run ahaantii waa warbixin aad muhiim u ah.
wadamadan waxaa aad ugu soo qulqulaya familo badan oo soomaali ah
Qore: Mahadsanid waa hubaa markaanu dayacnay dowrkeenii waalidnimo, in dhibaato badan caruurteenii ka dhaxleen …. Waa musiibo ilmaha lagu soo dhextuuray wadamadaan , dhaqan , diin , af , ka duwan ee haddana laga seexday ee la leeyahay . Maxaadan u TOOSNAAN !!
Waxay taasi la mid tahay ,qofaa gacmaha ka xirtay, bad wayna ku dhex tuurtay oo aad tiri …. Ha Qoyin !!
ADEER HAKU MASHQUULIN DADKAN HORTAA IYO DABADAABA WAY NOOLAYEEN WANAY NOOLAN DOONANE SHALAY BAAD SWEDEN SOO GASHAY 1980 DADKII SOO GALAY EE SIDAN OO KALE AHAA AYAA KU NOOL ILAA HADA MARKAA ADEER MUSTAQBALKA ALAA HAYEE HAKU MARAYSAN DADKANE CAMAL KALE RAADSO.
ASC..WAA MAWDUUC MUHIM AH OO UBAAHAN IN LAGA HADLO OO KHUSEEYO FAMILADA SOMALIYED KUWII HORE IYO KUWA DANBE INTABA ,,MARKE CARUURTEENU WAA INAAN WAQTI UHELNAA OO TARBIYADOODA SAXDA AH AAN KAFIKIRNAA SIDA AAN UGU FIKIRNO CALOOSHOODA XATTAA DIINTEENE WAA OGNAHAY WAXA EY KATIRI TARBIYADA CARUURTA TAARIIKHDA NABIGANE (SCW) QOFKII DARAASEEYO EE SI WANAAGSAN UFAHMO WAA EY KUFILANTAHAY TARBIYADA CARUURTA NABIGEENE SCW CARUURTE WAA UU XANAANEEN JIRAY OO XATTAA ASAGOO SALAADA KUJIRO OO IMAAM AH OO DADBADAN TUJINAAYO AYUU XASAN IYO XUSEYN OO GABDHIISU DHASHAY AYUU XANBAARI JIRAY NABIGE AAD IYO AAD AYUU MISAAL WANAAGSAN UGU AHAA XAGE TARBIYADA CARUURTA WARKE WAXAAN KU SOO KOOBAAYAA IN SIIRADE NABIGE AAN DARAASAAD KUSAMEYNO SI AAN UGU FAA IDEYSANO DHINACAAS OK
asc all runtii waa arin dhibkeeda in wadamadan aynu ku noolnahay caruurtu ay tarbiyad fiican helaan caruurta aan caqligoodu korin waxa ay indhuhu arkaan unbay ka hadlaan “sida hooyo goormaynu cadaanaynaa?!!iyo hooyo macalimiinteenaba ma xijaabtaane maxaa u xijaabantahay?iyo waxyaabo badan oo aan qoraal kusoo koobi karin runtii waqti yar ayaynu ilmaha la joognaa hadii aan waalidiin nahay waxaa naga waqti badan iskuulada ama dagisyada guriga waxaaba isku arkaysaan ilamahaaga waqti yar oo habeenkii ah oo lakala seexanaayo intaana wax aad u sheegi karto ayaaba iska yar because adigaba noole ayaa tahay oo waa daalantahay ilmihiina waaba kaa xagjiraa oo intuu cuntaynayoo inuu soo jeedo ayaaba la arkaa waa cajiib!!!ilaahow annaga iyo ubadkeenoo nabad qabno nagu celi wadankeenii oo nabad ah aamiin yaa rabi.
asc wsm dhamaan umada soomaaliyeed salaan kadib anigaa kuusheegayo waa dhibaatada iyo sida looga baxayo madooneeysaa aqriso dhamaan waxan sooqaray .
muudooca waa fiicanhay moow duucaan aad baan usugaay moow dooc sidaan ah 1 dadka waalid kaa waxan kusoobarbaarnay meel aan kabaqno waa lidka keeyna iyo macalinta . caroorta marka eey wax ku dheelaan waxa ladhihijiray waxan kuusheega waalidkaa marka dugsigane macalinka ! maxaa isbadalay marka lajooga wadamanka reergalbeedka dugsiga wali waaladhahaa caruurta waxan kuusheega macalinta . maxaa isbadalay cunogii wax kudheelo hadaad canaanato waxa lagoosheegayaa shooshaalka waalidoow hadii adiga lago dhihijiray waxan kuu sheega waalidkaa meeshaan waxa eey kuugu bada leen shooshaalka iyo poliska waxa eey kuleeyihiin gacmahaada gadaal ulaab ! caroortaada ama aad xoog u sheegatit waalagaala wareeygayaa ayidoon laguudigin sida ina aad gabarta aad gudig 2 ina aad kutarto nin eeysan rabin. sideen uga bad baadikarnaa 1 waa ina aad caruurtaada sxb iyo waalid la noqotaa waa ina cunugaada aad ugaadaa waxa oowjeceljahay iyo waxa oow nacebtahay mataqaanaa hada? waxa oow baranaayo xaa ku adkaaday isboocaan maxaase ugu fududaay mataqaanaa ?waxa oow bartay qaqankaada iyo diintaada maxeey dhiba eey ukeenayaan hada mataqaanaa? waxa labaraayo ma dhib yeey ukeenayaan mase weey kufiicanyahiin mala sucutaa hada? intaas ma iisheegikartaan waalidoow oo ma usameeyday cunugaada hada ?mageeysaa meelaha loodal xiistago sanadkii meeqa mar ayaad geeysaa ma iisheegikartaa? mase waxad ku arooridaa ayooda lacagtaada? baahida cunugaada oow qabo meeqa yaad u sameeysaa 100%10 mase 20 mase 30? marka oow kuraayo caroortadaada iyo barbaarintiisa meeqa mar ayaad usameeyday wax oow kufar oow waligees oowsan hilmaamin ? cunugaada ina oow wax dalba karo waxne oow diidikaro masutaa ? cilmahaada si iskula mid ah ma ula dhaqantaa wiil iyo gabar ? hadaad intaas lagaa helo mustaqbalka caruurdaada waa fiicnaanayaa insha alaah diintane waa 1 dhaqanka waa 2 afkaada hooye ok baay